Ọwa Suez: njirimara, owuwu na akụkọ ihe mere eme | Netwọk Mgbasa Ozi
Mmadu abụrụla onye na-akwado ọtụtụ ụkpụrụ ụlọ. Okike nke ọwa nwere ike ijikọ Oké Osimiri Uhie na Oké Osimiri Mediterenian bụ ihe mkpali nke mmepeanya oge ochie nke mejupụtara Isthmus nke Suez. Enweela ọtụtụ mgbalị ruo mgbe ewusịrị njedebe Osimiri Suez. Routezọ ahụ dị oke mkpa site n'echiche akụ na ụba ma nwee nnukwu akụkọ na-atọ ụtọ nke anyị ga-agwa ebe a.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Osimiri Suez, ewu ya na akụkọ ihe mere eme ya.
2 Akụkọ banyere Suez Canal
3 Ihe owuwu ya
Anyi agaghi alaghachi rue mgbe mbu anyi choro iji wuo uzo mmiri a na XNUMXth century BC N’oge ahu, Fero Sesostris nke Atọ nyere iwu ka a rụọ ọwa mmiri nke nwere ike ijikọ Osimiri Naịl na Osimiri Uhie. Ọ bụ ezie na o nwere obere obere ohere, ọ ga-ezuru ya iji nweta ụgbọ mmiri niile n'oge ahụ. Ejiri ụzọ a mee ihe ruo etiti narị afọ nke asaa BC. Ọzara buru ibu nke na ọ nwetara akụkụ buru ibu nke ala site n'oké osimiri, na-egbochi ụzọ ọpụpụ na ya.
N'ihi nke a, Fero Neco gbalịrị imeghe ọwa mmiri ahụ n'enweghị ihe ịga nke ọma ọ bụla. Ihe karịrị ndị nwoke 100.000 nwụrụ n'ime mgbalị iji mepee ọwa mmiri ahụ. Ọ bụ mgbe otu narị afọ gasịrị ka eze Peasia, Darayọs, ọ malitere ịrụ ọrụ iji nwee ike iweghachite akụkụ ndịda nke ọwa mmiri ahụ. Echiche ya bụ iweta ọwa nke ụgbọ mmiri niile ga-agabiga na Mediterenian na-agaghị agafe Osimiri Naịl. Ọrụ ndị ahụ kwụsịrị narị afọ abụọ mgbe nke a gasịrị n'okpuru iwu Ptolemy II. Okirikiri nhọrọ ukwuu yiri nke Suez Canal ugbu a.
Enwere ihe dị iche na mita itoolu n'agbata ọkwa mmiri nke Oké Osimiri Uhie na nke Oké Osimiri Mediterenian, ya mere, a ghaghị itinye nke a n'uche na ngụkọta oge maka iwu nke canal. N’oge ndị Rom na-achị Ijipt, e nwere ọganihu ndị gbara ọkpụrụkpụ nke pụrụ ịkwalite azụmahịa. Agbanyeghị, mgbe ọpụpụ nke ndị Rom, ọwa mmiri a a gbahapụrụ ya ọzọ ma jiri ya mee ihe ọ bụla. N'oge ọchịchị nke ndị Alakụba Caliph Omar bụ onye na-ahụ maka mgbake ya. Mgbe otu narị afọ gachara, ọ laghachiri n'ọzara ọzọ.
Anyi aghaghi iburu n’uche na ozara nwere ihe n’aga n’iru na oge aja nwere ike imebi ihe nile di na ya.
Akụkọ banyere Suez Canal
Ọnụnọ nke Suez Canal nọgidere bụrụ nke zoro kpamkpam kemgbe ahụ otu puku afọ. Ruo mgbe Napoleon Bonaparte rutere Egypt n’afọ 1798. N’etiti otu ndị ọkà mmụta soro Napoleon, e nwere ụfọdụ ndị injinia a ma ama na ya nwere iwu a kapịrị ọnụ ka ọ nyochaa ala ahụ dị warara iji chọpụta ma ị ga-emepe ụzọ ka ọ nwee ike ịgafe. ndị agha na ngwaahịa na East. Ebumnuche bụ isi nke ọwa mmiri ahụ bụ ụzọ azụmahịa.
N'agbanyeghị ịchọpụta ihe ndị fero oge ochie na-achọ ụzọ iji meghee ọwa mmiri ahụ, injinia nke usoro nke iwu ya enweghị isi. Ebe ọ bụ na mita abụọ dị iche n’etiti osimiri abụọ ahụ, o kweghị ka e wuo ya. Ọtụtụ afọ gafere, kilomita nke rịrị elu bụ mkpa imeghe ụzọ mmiri a.
Ugbua n'etiti mgbanwe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, azụmaahịa East Asia akwụsịla ịbụ ihe okomoko ma bụrụ ihe dị mkpa maka uto akụ na ụba nke ike ndị isi Europe niile. Na 1845, agbakwunyere uzo ozo, nke bu nke mbu Gbọ okporo ígwè Egypt jikọtara Alexandria na ọdụ ụgbọ mmiri nke Suez. E nwere ụzọ dịpụrụ adịpụ site na Sinai ọzara mana ọ bara uru n'ihi oke ibu nke ndị njem ahụ nwere ike iburu. Ahiahia wɔ mmeae a ɛkorɔn no paa.
Uzo nke ugbo elu ugbo ala mbu bara ezigbo uru maka ibughari ndi njem ma ezughi oke maka ibughari ahia. Ọ gaghị asọmpi ụgbọ mmiri ọhụrụ dị n'oge ahụ, nke dị ngwa ngwa ma nwee nnukwu ibu ibu.
Ihe owuwu ya
N'ikpeazụ, ọrụ maka iwu nke ọwa mmiri a malitere na 1859 site n'aka onye nnọchi anya French na onye ọchụnta ego Ferdinand de Lesseps. Mgbe afọ 10 nke owuwu ya, e inaugurated ma ghọọ otu n'ime ndị kasị ibu engineering ọrụ na ụwa. Ọtụtụ puku ndị ọrụ dị ka ndị ọrụ ala Ijipt na-arụ ọrụ n'ike na n̄kpọ nte owo 20.000 ke otu mmọ ẹma ẹkpan̄a ke ntak nsọn̄ọn̄kpọ emi ẹkedade ẹbọp ufọk oro. Ọ bụ oge mbụ na akụkọ ntolite niile eji igwe igwe eji arụ ọrụ maka ọrụ ndị a.
France na United Kingdom jisiri ike banye n'ọwa a afọ ole na ole mana Onye isi ala Egypt mere ka ọ bụrụ mba ya na 1956. Nke a mere ka ọgba aghara mba ụwa a maara dị ka Saịnaị Sinai. Na agha a, Israel, France na United Kingdom wakporo mba ahụ. Ka oge na-aga, n’agbata 1967 na 1973, e nwere agha Arab na Israel, dịka Yom Kippur War (1973).
Ntughari ikpeazụ nke Ọwa Suez bụ na 2015 ya na oru mgbasawanye nke buterela ọtụtụ esemokwu ebe ọ bụ na o rutego ikike na ogologo ya ugbu a
Naa ọ ghọrọ dịtụ ọzọ ma ama ọzọ n'ihi na Ndabere nke ụgbọ mmiri enyerela enyere karịa 300 ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri iri na anọ na-arụ ọrụ na ọdụ ya siri ike iji weghachite okporo ụzọ ụgbọ mmiri na mpaghara ahụ.
Ọnọdụ akụ na ụba dị na eziokwu bụ na ụfọdụ ụgbọ mmiri 20.000 na-agafe ọwa a site na aka ma ọ bụ ọwa mmiri zuru oke nke ejiri n'Ijipt. N'ihi nke a, mpaghara ahụ dum abụrụla ihe ọgaranya site na mgbanwe azụmahịa. Ọ na-enye ohere ịzụ ahịa ụgbọ mmiri n'etiti Europe na South Asia ma nwee ebe dị mma.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Ọwa Suez, owuwu ya na akụkọ ihe mere eme ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Osimiri Suez